Iyo Nintendo Shandura, iyo inomhanya-refu kambani inoshanduka-chinja koni zvakadaro. Zvese zviri zviviri koni uye chishandiso chakabata, unogona kuchiridza kumba kana kuenda, uye kunakirwa nezvakawanda zvekare zveNintendo zvivakwa zvausingakwanise kuwana chero kumwe. Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze?
Zvakanaka, iwe unogona kukumbira zvirinani vatongi. Iyo Nintendo ufambe Pro Controller uye Mufaro-Cons zvinodhura kwazvo, uye iyo Joy-Cons, kunyanya, inozivikanwa kuti ivandudze nyaya dzinodzika mumatanda avo eanalogog. Haisi iyo yakanakisa! Asi pachinzvimbo, iwe unogona kutora vamwe vechitatu vatongi vevatengo zvakachipa uye zvine nharo vane nguva iri nani.
Vazhinji vatambi vanogona kuramba zano rekuti vasashandise vanodzora - ini pachangu ndakasanganisira - asi Nintendo akapa marezenisi zviri pamutemo kune mamwe emakambani kuita vatongi vakamiririra, uye vamwe vese vanotsigirwa nematoni eongororo dzakanaka. Mira kunetseka uye tora imwe yeakanakisa Nintendo Chinja vatongi!
Akanakisa Nintendo Chinja Anodzora Kwose: PowerA Inowedzeredzwa Wireless Mutongi
Kana iwe uchida mhedziso yakanakisa yeNintendo Shandura controller, haugone kurova PowerA Yakawedzeredzwa Wireless Controller. PowerA ndeimwe yemakambani maviri akapihwa marezenisi zviri pamutemo neNintendo kuita vatongi veiyo switchch, uye ndivo vari kugadzira vatongi vari padhuze neyakajairika koni chiitiko, pasina kukubhadharisa madhora makumi manomwe semukuru Pro Controller.
Iyo MSRP yevatongi ava i $ 50, asi ivo vanogara vari pamutengo. Panguva yekunyora, angangoita ese makumi maviri nemasere mazita erondedzero yemutongi uyu aive neimwe nzira yekutapudza (kana iri muchitoro), uye paavhareji ungangobhadhara padyo ne $ 28 kana $ 35 yemutongi. Kune zvakare kune boka reakasiyana mavara uye dhizaini sarudzo, zvakare! Pokemon vanodzora, vatongi veMario, veMinecraft vanodzora… pane chokwadi chinhu pano kune wese munhu!
Chinhu chega chaunofanira kuziva nezve uyu mutungamiriri ndechekuti iwe unoda 2 AA mabhatiri kuti uishandise (izvo hazvisi zvese izvo zvakasiyana neiyo Xbox One controller). Kana iwe uchigona nyore kuisa kumusoro mabhatiri anogadziriswazve, zvakadaro, iri kure neyekutengesa-kutyora!
PowerA Yakawedzerwa Wireless Controller
Nei uchibhadhara zvakanyanya iwe uchikwanisa kuwana yakanakisa Nintendo Chinja mutongi pane zvishoma? PowerA's wireless controller inoita chero chinhu icho Pro Controller chingaite pahafu yemutengo. Kana iwe usingade mutungamiriri anoverenga Amiibos, saka uyu mutongi ndeye yakasimba kutenga.
$ 40 ku Amazon
Akanakisa Retro-maitiro Mutongi: 8Bitdo SN30 Pro Mutongi
Ukasaina iyo Nintendo chinja Online kunyorera, iwe unowana mukana weNES uye SNES mitambo seimwe yemabhenefiti ebhenefiti. Iwe unogona kukurumidza kusvika pakuziva, zvakadaro, kuti kutamba aya mazita ekare nematanda eanalogog hakusi kwakanyanya. Iwe uchazoda kutora controller inoteedzera iyo yekare-chikoro chiitiko, uye iyo 8Bitdo SN30 Pro Mutungamiriri ndiye anofanira kuzviita.
Iyo SN30 inodzokorora kutaridzika uye manzwiro evatambi veSNES vanodzora, kusanganisira kuisa chaiyo D-pad kumberi nepakati, saka zvichave nyore kutamba mazita eRetro. Kusiyana Nintendo's official and limited SNES controller yeiyo Shanduko, zvakadaro, iyo SN30 Pro inouyawo nematanda maviri eanalogog. Chaizvoizvo, unogona kushandisa uyu controller kutamba chero mutambo, kwete iyo NES neSNES chete-mutsara paconsole.
Kana iwe uchida kutamba mitambo yeRetro pane yako smart kifaa, unogona kana kumisikidza iyo SN30 Pro Controller neako Apple kana Android chishandiso. Ndiani asingade zvekuwedzera mashandiro nekutenga kwavo?
8Bitdo SN30 Pro Mutungamiriri
Unoda retro inzwe nebasa rakazara? Tarisa kwete kumberi kupfuura 8Bitdo's SN30 Pro Controller. Uine chikoro chekare-D-pad uye matanda maviri eanalogog, unogona kutamba zvakanaka chero mutambo paSwitch nemutongi uyu.
$ 45 ku Amazon
Yakanakisa Nintendo Chinja Wired Mutongi: PowerA Wired Mutongi
Tarisa, ndakagara munzvimbo isina kubatana kweBluetooth zvisingaite mushe. Ndiri kutaura "yangu keyboard uye mbeva tsoka kutsika kubva kuadhaputa uye ichiri kudonhedza zvekuisa" mazinga. Saka ini ndinogona kunzwisisa kukwezva kwemutyairi wired. Vane waya vanodzora vanozove vakasimba kwenguva refu, zvakare, saka ivo sarudzo yakanaka kana uine vana vadiki vakatenderedza imba vasingatarise nemagetsi avo.
PowerA ine mhinduro yako neiyo Wired Mutungamiriri weNintendo Chinja. Mutongi uyu akafanana zvakanyanya neasina waya waya, asi… tsime, ine tambo! Zvakare, uyu ndomumwe weanodzora anodhura pamusika zvakare, anouya ne $ 25 chete. Kana chimwe chinhu chikaitika kune uyu mutongi, hazvisi zvekudhura kutsiva! Iyo tambo yakareba gumi tsoka, saka iwe unofanirwa kuve nenyaya kana iwe uchida kugara kumashure zvishoma nzira kubva kuTV.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chine wired uye usingade iyo tambo ye USB inosungirirwa kunze kana uchitamba mitambo, iyi ndiyo yakanakisa Nintendo Chinja controller kuti ubate.
PowerA Wired Mutungamiriri
Unoda wired controller? PowerA's wired controller ingori $ 25 chete, ine ese mashandiro e yavo isina waya controller, uye ine gumi-tsoka tsoka tambo. Iwe haugone kuve nani kupfuura izvozvo!
$ 25 ku Amazon
Yakanakisa Joy-Con Kutsiva: Hori Split Pad Pro
Hazvirevi kuti ndinovenga Joy-Cons. Izvo ndezvekuti vane matambudziko mazhinji, kunyanya pamutengo wavo. Nyaya dzine tsvimbo dzeanalogog dzawana zita radzo panguva ino (iyo Joy-Con kutsauka), uye nepo Nintendo ichigadzirisa irikufamba Joy-Cons mahara, haifanire kunge iri dambudziko pakutanga nzvimbo yechinhu chaunobhadhara $ 80 nokuti. Pamusoro peizvozvo, kunyangwe iyo nyowani modhi Joy-Cons inoita kunge inotambura nekukukurwa kunyangwe neyakafungidzirwa nani kuvaka mhando. Nei uchinetseka kana iwe uchigona kuwana Hori Kupatsanura Pad Pro pachinzvimbo?
Inowanikwa mune mashoma masitayera eUS $ 50, iyo Hori Split Pad Pro yakakura, ine bulkier, uye yakazara yakavimbika kupfuura iyo Joy-Cons. Zvingaite here kuti zviomere zvishoma kuti ubate switch yako kutenderera kunze kwemba? Chokwadi, asi kana iwe wakaita seni uye uchida kuridza Chinja pasofa uchiona TV, aya ma controllers anonyanya kukosha. Kubata kwakakora kunoreva kuti maoko ako achange akasununguka, uye ongororo zhinji paAmazon dzinosvora nezve mabhatani anogadziriswa.
Pane chinhu chimwe chete chekucherechedza nezve Split Pad Pro, zvakadaro. Ivo havana mabhatiri mune anotonga, saka haugone kuzvishandisa zvakasarudzika sezvaungaita Joy-Con. Izvi zvinoreva zvakare kuti vanofambiswa neNintendo Shandura pachayo, iyo inogona kukweva bhatiri zvishoma kana iwe uri kuenda. Pakazara, zvakadaro, iyi ndiyo yakanakisa Nintendo Chinja controller yekutamba iyo switchch mune yakabata ruoko modhi.
Hori Nintendo Chinja Kupatsanura Pad Pro
Mira kutamba neiyo diki Joy-Cons, uye tora beefier Hori Split Pad Pro. Pa $ 50, iyi iri $ 30 isingasviki paviri yeJoy-Cons, uye ivo vanonyanya kugadzikana nekubata kwakakura. Vanogona kunge vasingagunun'una, asi iwe unodzivirira maoko kukakavara!
$ 50 ku Amazon
Akanakisa GameCube-maitiro Mutongi: PowerA Wireless GameCube Style Mutongi
Vanhu vanoda GameCube vatongi. Handina chokwadi chaizvo kuti sei, asi ivo vakasarudzika uye vakasununguka. Ehezve, vatongi veMitamboCube vanowanzove nedambudziko rekusaenderana neanhasi-mazuva ekunyaradza. Kunyangwe iwe paunogona kuwana GameCube adapters yeiyo Shanduko, iwo anotonga ari tekinoroji yekukwegura, uye anosungirwa kuputsa munguva pfupi inotevera.
kupinda PowerA Wireless GameCube Chimiro Mutongi. Uyu mutungamiriri anodzokorora kutaridzika uye kunzwa kweyekare GameCube controller, kudzika kune iconic yepepuru ruvara. Kwete izvozvo chete, zvakadaro, uyu mutongi ane mabhatani ese aunoda kuti utambe mitambo paSwitch, seyeKumba uye skrini mabhatani. Uye haina waya, izvo zvinoita kuti mutungamiriri ave nyore kushandisa pane yakajairwa GameCube controller. Kana uchida Super Smash Bros. Pakupedzisira, uyu angangove akanakisa Nintendo Chinja controller kutamba murwi naye.
Icho 100% replica yemakumi emakore-yekare GameCube controller? Kwete, asi ndicho chinotevera chakanakisa chinhu. Heck, zvinogona kunge zviri nani mutongi.
PowerA Wireless GameCube Chimiro Mutongi
Kuda iyo GameCube maitiro, asi uchida mutungamiriri izvo zviri nyore chaizvo kushandisa neiyo switch? PowerA's isina waya GameCube controller ndiyo inobata. Tora iyo GC fomu chinhu neese mabhatani aunoda kuti utambe chero mutambo, Smash Bros. inosanganisirwa.
$ 37 ku Amazon
Akanakisa Amiibo-anoenderana Nintendo Chinja Anodzora: Nintendo Chinja Pro Controller
Kana iwe uchida kushandisa zviri nyore Amiibos neNintendo switch yako, ipapo uchafanirwa kuenda nemutungamiriri weNintendo. PowerA naHori vanogona kupihwa marezenisi zviri pamutemo neNintendo kuti vagadzire vatongi vakuru, asi ivo vachiri vasina mukana kune tekinoroji inoshandiswa kubatanidza zvidhori kumutambo ivo pachavo. Nezvo zvataurwa, iwe unosara uine mbiri chete sarudzo- iyo Joy-Cons kana iyo Pro Controller. Iyo yakanakisa Nintendo Chinja controller yeichi chikamu, saka, ndeye iyo Pro Controller.
Usafunge kuti yakahwina chete nehurongwa hwekubvisa, asi –Nintendo's official controller yakanaka kwazvo pachayo. Iyo Pro Controller yakasimba uye inonzwa yakakura mumaoko ako, inova nhanho huru kubva kune mutete Joy-Cons. Ivo zvakare vanopa inoshamisa inoreba hupenyu hwebhatiri (inonzwa kureba kupfuura yangu maPS4 macontroller, zvirinani), uye zviri nyore kubhadharisa ne USB-C tambo, chimwe chinhu icho vazhinji vevanokwikwidza console vanopa vasingape. Chingave chakanakisa Nintendo Chinja mutongi mune zvese, kana zvisiri chinhu chimwe… mutengo wayo. $ 70 iri pamusoro pevhareji yemutongi ichi chizvarwa checonsole, uye zvakaoma kupokana neruzivo rwePowerA rwekuenzanisa zvakanyanya.
Asi kana iwe uri kutenga Amiibos kune zvinopfuura zvekushongedza chete, uchafanirwa kuenda nePro Controller.
Nintendo ufambe Pro Controller
Dzimwe nguva, haugone kupokana nezvinhu zviri pamutemo. Nintendo's Pro Controller yakanaka pakutamba mune yakamisikidzwa modhi, ine dhizaini dhizaini uye hurefu hupenyu hwebhatiri. Iyo $ 70 MSRP inogadzira ichi chechinhu chemutengo wakakwira kwazvo pane yedu runyorwa, asi seimwe yemhando shomashoma mhando dzinopa Amiibo mashandiro, uyu mutungamiriri ndiye akanakisa.
Yakanakisa Diki-fomu Nintendo Chinja Mutongi: 8Bitdo Lite Bluetooth Gamepad
Kana iwe uine Nintendo Chinja Lite, iwe watove wafunga kurega kugona kutamba mune yakamisikidzwa modhi kuti uve nekuwedzera kutakurika. Asi dzimwe nguva, iwe uchazoda kugara pasi uye uchitamba mutambo neicho chaicho mutongi muruoko, pachinzvimbo chese system. Mazhinji evatongi pane ino runyorwa akakura uye ane hukuru, sezvazviri, ivo havana kunaka kune chiitiko chinotakurika. Nekutenda, 8bitdo ine mutsetse wevadiki vatungamiriri ayo ari nyore kurongedza neako switchch Lite, uye akanakisa Nintendo Chinja mutongi weboka iro ndiye 8Bitdo Lite Makaralı Gamepad.
Inowanikwa muTurquoise uye Yero kuti ifananidze iwo iwo mavara switch switch, iyo Lite Gamepad idiki, ichiita kuti zvive nyore kurongedza neako mutambo weconsole. Zvisinei, hazvisi wo diki, senge 8bitdo Zero 2, iyo yandinopokana yaigadzirirwa masvosve uye masvosve chete. Icho chakada kufanana nehuremu seJoy-Con, asi yakakura, iine ese mabhatani uye zvinokonzeresa iwe kuti utambe chero mutambo. Kwete weird hafu'Joy-Con ekuronga zvirongwa pano! Chekupedzisira, iyo Lite Gamepad inoshandisa maviri akazara D-Mapadhi achipesana nematanda eanalogog, saka haigone kupaza kana ikasundana ichitenderedzwa muhombodo.
Chekupedzisira, iyi gamepad inongova $ 25 uye inogara ichienda kutengeswa. 8bitdo inogona kunge isina kupihwa marezenisi zviri pamutemo neNintendo, asi ivo vanozivikanwa seye mhando mhando, kunyanya pakati pevatambi vemashure.
8Bitdo Lite Makaralı Gamepad
Tora iyo 8bitdo Lite Blutoorth Gamepad uye uve nemutongi waunogona kuenda newe chero kupi. Iine fomu yayo diki yechinhu uye sarudzo yeD-Mapadhi pamusoro pematanda eanalogog, izvi zviri nyore kurongedza neako switch kana Shandura Lite. Pa $ 25 chete, haugone kukanganisa!
Yakanakisa Nintendo Chinja Kurwisa Tsvimbo: Hori Shandura Kurwisa Tsvimbo Mini
Kana iwe uri wekurwa mutambo fan, iwe unoziva kuti kurwa matanda anowanzo kuve ari nani pane akajairwa controller. Tichifunga nezvese chigunwe jimunasitikisi iwe chaunofanirwa kuita kubvisa mabhatani akaoma, inova yakanyanya kugadzirika kana iwe uri kushandisa yako yese minwe kupesana neako chete zvigunwe zvako (uye apo neapo kunongedza minwe). Kana iwe uchinhonga mazita akadai Unofa Kombat 11 uye DragonBall murwi Z pane switch, ipapo iwe uchazoda kutora iyo Hori Shandura Kurwisa Tsvimbo Mini.
Kurwira vateveri vemutambo vanoti ichi chiitiko chekutanga chekurwa. Mazhinji ekurwa matanda anozove akawandisa uye nenzira inodhura, saka kuve neiyi diki yekurwira tsvimbo yemutengo mudiki poindi yakanaka kutora kana iwe usina chokwadi kuti unofarira kurwa matanda parizvino. Iyo ine zvese zvaunoda kubva kuSwitch controller, uye inotambanudza kumeso uye inokonzeresa mabhatani ane akakurisa akakomberedza mabhatani, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kubvisa iwo akawanda-bhatani combos.
Super Smash Bros. mafeni chenjerai, zvakadaro! Iyo joystick inongoshandisa yega D-Pad zvinowedzerwa panzvimbo peanogadzira tsvimbo yekuisa (pamwe kune mamwe mirairo chaiyo), isina nzira yekuchichinja. Ye Super Smash Bros. Yekupedzisira, izvo zvinoreva kuti wakanamatira kushora uye haugone kufamba! Saka muchidimbu, haugone kushandisa iyo Yekurwisa Tsvimbo Mini nemutambo iwoyo. Asi nokutendeseka, kana iwe uchida Smash Bros., iwe unenge uchizosarudza iyo GameCube style mutongi zvakadaro.
Hori Shandura Kurwisa Tsvimbo Mini
Wana zvakanyanya kubva mumitambo yako yekurwa neHori switchch Kurwisa Tsvimbo Mini. Chete $ 50 uye zvakapihwa marezenisi zviri pamutemo neNintendo, ino ndiyo yekutanga kurwa tsvimbo, ichikupa iwe nyaradzo yekubvisa yakaoma combos nyore. Ndokumbira utarise, zvisinei, kuti haienderane neSuper Smash Bros.!
The post Aya ndiwo akanakisa Nintendo Chinja Vanodzora: Hori, 8bitdo, PowerA, uye Zvimwe! yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Yakanakisa Nintendo Shandura kesi 2022: Chengetedza Shanduko yako, Shandura OLED uye Shandura Lite yakachengeteka neaya anoyevedza makesi ekufambisa.
Nintendo Switch FAQ: Zvose zvamunoda kuziva!
Nintendo Chinja zvishongedzo: zvinhu zvaunoda kuti unyatso kushandisa koni yako